အလင်းရောင်ကြယ်များ: June 2012
ကွန်ပျုတာစက်အား မလေးစေပဲ ကွန်ပျုတာအား ပုံမှန်လည်ပါတ်စေပြီး ကြာရှည်ခံ အသုံြး့ပု၍ မှားနေသော ဖိုင်များ ပြန်စီနည်း
အင်မတန်လွယ်ကူပြီး ကွန်ပျုတာကို ဘာဆော့ ဖ်ဝဲလ်မှ မလိုပဲ မူယင်းအတိုင်း ပေါ့ ပါးစေသော နည်းပါ ။မိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျုတာ တာဘယ်လောက်ပဲအရည်သွေးကောင်းပါစေ ဘယ်လောက်ပဲ မြန်ဆန်ပါစေ ကွန်ပျုတာ ကိုစတင်ပါဝါဖွင့် မယ်ကီးဘုတ်ပေါ်လက် စတင်တင်လိုက်တာနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အမှားယွင်းဖြစ် လာတာစမ်းသပ် တွေ့ ရှိရပါတယ်အင်မတန်အရည်သွေး ကောင်းတဲ့Apple –Dell- Asus ကွန်ပျူတာတွေလည်း မီးနစ်နဲ့စက္ကန့် အမျှ အမှားဝင်လာတာပဲ ။အင်တာနက်တပ်လိုက်တော့ ပို ဆိုးလာပါတယ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/29/2012 08:01:00 am3comments:
ဂျီတော နည်းပညာလေးများ အကြောင်း
ကိုင်းမိတ်ဆွေတို့က ကျနော်ကို နည်းပညာတွေ လာလာမေးနေကြတယ် ခက်တာကလည်း
ဂေါ်လီက သတင်းစာဖတ်တဲ့ဝေမျဘလောက်ဂါသမားဆိုတော့နည်းပညာနဲ့ 
လှန်းဝေးပါတယ် တစ်ခါတစ်လေ မိမိစက်တောင် သုံးနေရင်းဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်း မသိ
ကြုံ ရပေါင်းများပါပြီ၊ အွန်လိုင်းက နည်းပညာလေးတွေ လိုက်ရှာပြီး ၊ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်
ပါတယ် ၊အခုလည်း ဂျီတောအကြောင်း အွန်လိုင်းကနေ ရှာဖွေကူး ယူ.... အဲ..( ခိုးချ)ထားပါတော့ 
အောက်မှာ..သင်ကိုယ်တိုင်သာ ...လေ့ လာပေတော့ ဗျာ...
snow.king836: အစ်ကို ရေ g talk ဖုန်းပြောတာ ဒိကပြောတာမကြားရဘူး ဟိုကပြောတာကြားရတယ် ဒါလေး ပြောပေးပါဦးဆိုပြီးမေးလာတာရှိလို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပြန်တင်ပေးတယ်ဆို တာ ဒီဆိုဒ်မှာ တင်ထားတာတော့ မရှိသေးပါဘူး အရင်ဆိုဒ်ဟောင်းမှာ သီရိလင်္ကာက ရဟန်းတော် တစ်ပါးမေးဖူးဖို့ ဖြေပေးထားတာလေး တင်ထားလိုက်တာပါ သိပ်ကြီးကျယ်တဲ့ အ၇ာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် အခက်တွေ့နေကြတဲ့ သူတွေ အဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်တင်ပြလိုက်တာပါ ဒီမေးခါန်း မကြာမကြာမေးတတ်ကြပါတယ် အားလုံးအဆင်ပြေစေလို့ ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါပဲဗျာ
(၂) microphone properties ဘောက်ကျလာပါလိမ့်မယ်၊ အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါ levels ကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊
microphone နှင့် microphone boost setting ၂ခုကို တွေ့ ရင်အပေါ်က မိမိတို့ စက်ရဲ့ အသံအတိုးအလျှော့၊ အဝင်သံပေါ့နော်၊အောက်က microphone boost ကတော့မိမိတို့ ကပြောတဲ့အထွက်အသံပါ.အဲဒီအတိုးအလျှော့လေးကို +40.0 db ထိမြှင့်ပြီးပြောလို့ ရပါတယ်.ပြီးရင်
(၃)ok လေးတွေ ဆက်တိုက်သွားပြီးရင်
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ မှာ ဂျီတော့ကိုစမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို မျှော်လင့်ပါတယ်.
Gtalk မှာ မြန်မာစာ မရတဲ့ ပြသနာ
koko: အကိုရေ ညီလေး ကွန်ပျူတာမှာ ဂျိတော့က မြန်မာဖေါင့်မမြင်ရဖြစ်နေတယ် ရေးလိုရတယ် ဖတ်လိုမရဖြစ်နေတယ်.ညီလေးကိုကူညီပါအုံးနော်
အကာဖြိုး ။ ။ ဒီမေးခွန်းက ထပ်တလဲလဲ မေးနေတတ်ကြတဲ့မေးခွန်းလေးပါ ဖြေတာလဲ ထပ်နေပါပြီ အခုထပ်ပြီးဖြေပေးလိုက်ပါမယ် နောက်ဆိုရင် ကျွန်တော် လင့်ကိုပဲပေးလိုက်ပါတော့မယ်ဖြေပေးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ပိုစ့်တွေ ထပ်လွန်းလို့လေ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး
ညီလေးစက်က Internet Exoplor လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ ညာဘက်နားလေးမှာ Tools ဆိုတာလေး ရှိတယ် အဲဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ဆုံးနားမှာ Internet option ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပါ နောက် General ထဲမှာ Font ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပါ နောက်ပေါတစ်ခုပေါ်လာရင် zawgyi-one ကို ရွေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ
နောက် Gtalk setting ကို ဖွင့်ပါ General ထဲမှာ change font ဆိုတာလေးကို ရှာပြီး ကလစ်ပါ နောက် ပေ့တစ်ခုတက်လာပါမယ် zawgyi-one ကို ရွေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် ရပါပြီ
မရသေးဘူး ဖြစ်နေရင် ဒီနှစ်ခုစလုံးကို သေချာ ပြန်စစ်ပါ ထပ်လုပ်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်
Connection ကျနေစဉ် G talk, G mail ဖွင့်နိုင်စေရန်
Connection ကျနေစဉ် G talk, G mail ဖွင့်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်း
-manual poxy အောက်တွင် HTTP poxy ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပေါ်လာလျှင်HTTP poxy box တွင်
212.93.193.72 ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ ဘေးက Port box တွင်
Gtalk ဖွင်လိုလျှင်- gtalk settings ထဲဝင်ပြီး connection ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် use the following poxy ကိုနှိပ်
ကျွန်တော်ကတော့ 212.93.193.74 port 443 နဲ့ 
G talk မှာ မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းဟာ ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာသိဖို့ 
ဒါဆိုinstall လုပ်သွားလိမ့်မယ်... ပြီးရင်မော်ဇီလာကို restart လုပ်ခိုင်းလိမ့်မယ်... အဲ့ဒါလုပ်ပေးပြီးလို့
မော်ဇီလာပြန်တက်လာရင် view ထဲက sitebar မှာ Gtalk sitebar ဆိုတာလေးကို on ပေးပါ...ဒါဆိုသုံးလို့ ရပါပြီ...Type your summary here. [more] Type the rest of your post here.
gtalk ကိုဒီအတိုင်းသုံးမဲ့ အစားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်....
၁၆။windowနဲ့mနဲ့က firefoxကိုminimizeလုပ်ထားလို့ရပ်ါတယ်။ပြန်ဖွင်ချင်ရင်တော့window shiftကိုဖိပြီး m ကိုနိုပ်ပါ။Type your summary here. [more] Type the rest of your post here.
Gtalk ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်း Message ပို့ချင်တဲ့ လူများအတွက်
gtalk ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်းMesge ပို့ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီက ပို့ကြည့်ကြည့်တယ် လွယ်လည်းလွယ်တယ်။ တစ်ကယ်ရောက်တယ်ဗျ။ ပို့ချင်တဲ့ လူများ အောက်က သေသေချာချာဖတ်ပါ။အချိန်တော့နည်းနည်းတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ညနေ ၅နာရီလောက်ကပို့ထားတာ ည၁၁နာရီလောက်မှရောက်လာတယ် ။ မိုက်တော့မိုက်ပါတယ် ...
sms နဲ့ ဖုန်းနံပတ်အကြားမှာ Spacebar ခံရပါတယ်။ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ hello အကြားမှာ spacebar ခံရပါတယ်။country code တွေ ခံစရာမလိုပါဘူး။ 095217892 ဆိုတာနဲ့ရပါပြီး။ ကျွန်တော်အခုရေးလိုက်သော ဖုန်းနံပတ်များမှာ စိတ်ကူးထဲက ပေါ်လာတဲ့ ဖုန်နံပတ်တွေပါ။ တစ်ကယ်လို့ တိုက်ဆိုင်းပြီး ဖုန်းနံပတ်တူနေတာများရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါ။ message ကို အများကြီးရေးလို့ မရပါဘူး။ဒါပေမယ့် စာလုံးရေ ၅၀ or ၁၀၀ လောက်ထိတော့ ရမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အသေအချာမစမ်းရသေးလို့ပါ။ စမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။ လုပ်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ပြောတယ်။ ပို့လိုက်တဲ့ ဖုန်းကနေပြီး reply ပြန်ပို့ရင် ကိုယ့် ဂျီတော့ ထဲ ပြန်ရောက်တယ်တဲ့။
ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေသူများ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပို့လေး တင်ဖြစ်သွားတာပါ။
သေးစိတ်ကိုတော့ http://talk.etmsms.com/gsm_gtalk.html ဒီမှာဆက်ဖတ်ပါဗျာ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/23/2012 12:24:00 pm No comments:
ဘလော့ဆိုဒ်မှာ ဘလော့ပိုစ့် တင်းနည်း ပုံစံ-၂ မျိုး ဖြစ်ပါတယ်
စလေ့လာကာစ သူများတောင်းဆိုထားတာလေးပါ သိပြီးသားသူအတွက်ကတော့ အဆန်း မဟုတ်ပေမယ့်မသိတဲ့သူအတွက် အခက် ဖြစ်နေလို့ ဘလော့ပိုစ့်တင်နည်း ပုံစံ အဟောင်း အသစ်2မျိုးလုံးကို ကျူတိုရီရယ်လေးလုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သိပြီးသူများ ကျော်သွားလိုက်ပေါ့
ကဲ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများ စလိုက်ရအောင်
အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါ ဒီပုံစံက ပုံစံ အဟောင်းပါ ပုံတွေ သေးနေတယ် ဆိုရင် ပုံပေါ် ကလစ်နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ
ပထမ မိမိအကောက်ဝင်လိုက်ပြီးအခြေအနေပါ အဲလိုမြင်ရပါမယ် ကိုယ်က ပိုစ့်အသစ် တင်မယ်ဆိုတော့ အနီရောင် ၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာ ကိုနှိပ်ပါ New Post လို့ စာရေးထားပါတယ်
နောက်စာမျက်နှာ တက်လာရင် အောက်ကပုံလို မြင်ရပါမယ်
အပြာရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှာ ပိုစ့် ခေါင်းစဉ်ရိုက်ထည့်ပေးပါ ဥပမာ- ချစ်ချစ်အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ်
အနီရောင်ပြထားတဲ့နေရာထဲမှာ ဖော်ပြလိုတဲ့ အကြောင်းအရာ စာကိုယ် ထည့်ရပါမယ်
ပန်းရောင်ပြထားတဲ့နေရာမှာ သီးခြားအုပ်စုအလိုက် ဖော်ပြလိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ထည့်ပေးရပါမယ် ဥပမာ ကဗျာများ ။ ဆော့ဝဲလ်မြို့တော် ကျန်တာတွေကတော့ ပုံကို ကလစ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
အောက်ကပုံကတော့ ယခု ပုံစံအသစ်ပါ တခါမှ ၀င်မထားဘူးဆိုရင် အောက်ကပုံလို အနေအထားနဲ့ စပေါ်ပါတယ် ၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာက မိမိ ဆိုဒ်နာမည်ပေါ်မှာ ကလစ်လိုက်ပါ
အခုတက်လာတဲ့စာမျက်နှာကို တစ်ခါတည်းမြင်ရင်လဲ မြင်ရတတ်ပါတယ် ဟာအကိုပြပေးတာမရှိဘူးဆိုပြီး မကြောင်သွားပါနဲ့ အောက်ကစာမျက်နှာတက်လာပါမယ် New Post ဆိုတာကို နှိပ်ပါ
အောက်ကစာမျက်နှာပေါ်လာပြီ အဲဒီမှာ စာရေးတင်လို့ ရတဲ့ အနေအထားရောက်လာပါပြီ အပေါ်မှာ ပြထားပြီးပြီမို့ ထပ်ပြောတော့ဘူးနော် မရှင်းရင် ပုံမှာ တစ်ခါတည်းနှိပ်ကြည့်လိုက် ရေးပြထားပါတယ်
နောက်ဆုံး အကုန် စိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီးပြီ ဆိုတဲ့ အခါမှာ PUBLISH POST ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဘလော့ပိုစ့်တက်သွားပါမယ် ဒါဆို ဘလော့ပိုစ့်တင်တာ ပြီးပါပြီ။
ကိုဂေါ်လီလက်ရှိသုံးနေသောနည်းလေးပါ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ရှာဖွေဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 6/23/2012 11:28:00 am No comments:
ကွန်ပျုတာစက်အား မလေးစေပဲ ကွန်ပျုတာအား ပုံမှန်လည...
ဘလော့ဆိုဒ်မှာ ဘလော့ပိုစ့် တင်းနည်း ပုံစံ-၂ မျိုးြ...
Blog site တွင် ကွန်မန့်ပေးနည်း
ငှက်မောင်နှံ ပုံ အင်တာနက် မှာ ရေပန်းစား
MyanmarExpress ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှ သတင်းပါ၊
MR T.V4မှထုတ်လွှင့် သော မြန်မာနိုင်ငံသူ ရခိုင်အမျ...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ ဒီမိုကရက်တစ် ပြုပြင်ပြောင်း...